Malleeshiyaadka Ruushka ee Fangar oo ka howl billaabaya Maali. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Malleeshiyaadka Ruushka ee Fangar oo ka howl billaabaya Maali.
Last updated Sep 15, 2021 107 0
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeyso ilo wareedyo kala duwan oo muhiim ah ayaa baahisay warbixin ay ku sheegeyso in golaha milliteriga ee dalka Maali uu heshiis la gaaray dowladda Ruushka, kaasoo u ogolaanaya Ruushka in dalka Maali uu geeyo malleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah.
Ugu yaraan 7 ilo wareed oo ay soo xigatay wakaaladda waxay xaqiijiyeen in la filayo in mudooyinka nagu soo aadan ay Maali soo gaaraan kun askari ama boqollaal askari oo katirsan malleeshiyaadka Fangar ee hoostaga Ruushka, kadib heshiis dhexmaray dowladda Ruushka iyo golaha milliteriga ee Maali.
Sida ay tilmaamayaan ilo wareedyadan dowladda Faransiiska oo gumeysi horey ugu heystay Maali, hadana kumanaan askari ka joogaan ayaa diidan tallaabadan, waxayna wadaa olole ay uga hor istaageyso saraakiisha milliteriga Maali iney saxiixaan heshiiskan.
Inkastoo aan illaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacin arintan, hadana waxaa muuqaneysa in saraakiisha milliteriga ee Maali ay doonayaan iney ku faraq xirtaan Ruushka, xilli Faransiisku muujinayo inuu ka daaley dagaalka 8 sano uu kaga jiro dalka muslimka ah ee Maali.
Malleeshiyaadka Fangar oo ah malleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah, hoostagana wasaaradda dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa ka howlgala wadamo ay kamid yihiin Suuriya iyo Liibiya, waxayna ku soocanyihiin iney yihiin kuwa manaxaan ah oo laaya dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah.